Dia lasa ny saina sy ny eritreritra hoe ny ao an-trano ihany izany no tsy azon’ny mpamosavy malemy manodidina ny filoha kitihina, fa ny Malagasy rehetra azo hampizakaina ny tsy rariny avokoa ary homena alalana hangoron-karena sy hanao izay danin’ny kibony ny mpamosavy rehefa tsy ny mpiray donak’afo aminy no asiany. Misy fomba fitenin’ny Malagasy anefa hoe “aleo mifanena amin’ny mpamosavy toy izay mifanena amin’ny mpandainga”. Ny mpamosavy malemy izay heverin’ny filoha fa hamely azy, dia ny namany ao an-dapa sy olona akaiky azy, izay mifampialona noho ny tombontsoa ka ny namany ihany no hopotehiny, ary hifandravarava ao izy ireo. Ny mpandainga kosa dia ny fiainan’ny Malagasy manontolo mihitsy no potiky ny fampanantenana sy ny kobaka am-bava, ka lainga natao fafy katrana avokoa ny nandrotsirotsiana ny valalabemandry. Firifiry tokoa moa ny ronono an-tavy natao tamin’ny Malagasy ka nametrahany fitokisana tamin’ny mpitondra ankehitriny saingy tratry ny lango malefaka sy ny lainga tsara lahatra, ka dia mijinja ny fahadisoam-panantenana ankehitriny, raha tsy hilaza afa tsy ny olan’ny delestazy izay nambara fa 3 volana dia mivaha. Tena tsy adala tokoa ny Ntaolo nilaza fa “aleo ihany mifanena amin’ny mpamosavy toy izay mifanena amin’ny mpandainga” ! Tena mifafa ny kiho ara-bakiteny e !